Isvikiro rakanyanya-garnet tsvuku. Pamhino, waini inoyevedza uye yakaibva, iine kunhuhwirira kwakasarudzika kwamakerubhi uye cherry jamu. Mumuromo, waini yakaoma, ine juzi, ine yakaomesesa akaibva tannins. Hunhu mumuromo hwakanyanya, nezvinonhuwira nezvinowanikwa kunze kwenyika, pamwe chete nechokoreti uye kuibva muhuni. Iwaini yakaoma kwazvo neine refu refu yekudya uye nehurefu hwehupenyu.
Kubatanidzwa kwemarudzi akasiyana-siyana:
Nzira Yekukwegura uye Kugadzira:
Kukohwa kwemanyoro kutanga kwaGumiguru. Mazambiringa acho akaomeswa kwemwedzi mumwe. Waini yacho inozochengeterwa kwemwedzi makumi maviri nemaviri emakirita 24 litere pane tembiricha uye humhutu. Isu tinoshandisa 225% Slavonia oak, 50% French Allier uye 47% French Troncaise oak.
Iyo Goriška Brda yainotakura dunhu, inoratidzwa nesikomo yenyika uye munyoro yepasi peMedhiya mamiriro ekunze. Minda yemizambiringa inotyisa inopfuura makore makumi matatu inodyarwa pasi peiyo imwechete yeGuyot system. Kudyara density pamiti mazana mashanu emizambiringa pahekita.
Kuburitswa kwakasiyana kwetirakiti kunze uko kwendebvu chiratidzo chega chekuti nzira yacho inogona kupinda munyika, iyo neimwe nzira inovaka pane basa remaoko, patsika neruzivo izvo zvinopfuudzwa kubva kuchizvarwa kuenda kune chimwe. Zvinoitika zvevakuru zvinodzidzisa kusaziva kwevadiki, uye papurazi redu, tinodada kwazvo kuti vabereki nevana vanogoverana kuchengetwa kweminda yemizambiringa, yewaini uye yekushambadzira.